SP-G06 SOICARE guriga mini 100ml udugga aromatherapy ultrasonic air humidifier saliid baahiyaha muhiimka ah, Shiinaha SP-G06 SOICARE guriga mini 100ml aromatherapy ultrasonic hawo qoyan ultrasonic saliidaha baahisa saliidaha faafiyeyaasha, shirkado, Warshad - Sunpai Industries Limited
SP-G06 SOICARE guriga mini 100ml udugga aromatherapy ultrasonic hawo qoyaanka saliidaha baahsan
SOICARE guriga mini 100ml udugga aromatherapy Xiinka hawo qoyaanka hawada saliida lagama maarmaanka u ah
10 * * 10 16mm
· OMHOMEWEEKS 100ML DHIBAATOOYIN BADAN OO LOO HELI KARO - Waxaa loo isticmaali karaa sida Udugga Daawada Uumiyaha, Uumeeyaha ama Nalka-Nuurka, Waxaad ku soo qaadan kartaa safarkaaga oo aad ku qaadan karto naqshadda la qaadan karo. Waxaa jira midabbo badan iyo midabbo wareeg ah oo loo xushay inay ku abuuraan jawi wanaagsan qolkaaga jiifka habeenkii.
· OP SHAQAALAHA FUDUD IYO BADAN - Faafiyaha ayaa si otomaatig ah u xidha marka heerka biyaha / saliidu aad u hooseeyaan ama uu wakhtigu dhammaado, taas oo xaqiijin karta nabadgelyada iyo nabadgelyada maskaxda .Sahlaad in la dejiyo oo dhammaan shaqooyinku way fudud yihiin in la shaqeeyo, xitaa a Ilmuhu wuu garan karaa.
· ► HOMEWEEKS humidifier Xiinka ultrasonic wuxuu bixiyaa ceeryaan aad u wanaagsan oo siman taas oo qoyan karta meesha aad degan tahay oo qoyan kara maqaarka qalalan Waxay kaloo kaa caawineysaa inaad si fiican u neefsato markii aad jiifsaneysid qaboojiye.
· SI Hufan U SII SAAR AGOONKAAGA - Saliidda muhiimka ah gudaha geli, Saliidaan muhiimka ah ee faafiye waxay buuxineysaa booska udgoon qurux badan oo kor u qaadi kara ruuxyada kana yareyn kara walaaca maalinta murugada iyo daalka, kuna habboon aasida sigaar cabista iyo urta xayawaanka, waxay gacan ka geysaneysaa inay nabad hesho hurdo ku wareegsan udgoonka udugga.
soo saarista ceeryaanta
17-25ml / saac
waqtiga shaqada ugu badan
dheriga cabirka, buuga, adabtarada
caraf 15 m², humidifer 8m²
SP-G12 Smart Alexa Weather Muhiimka ah udugga Oil caraf Xiinka Alarm Clock WiFi Udgoon Diffuser
SP-T2 SOICARE 300ml La qaadan karo Ultrasonic Cool Mist Maker USB USB Air Sprayer Mini Humidifier